China Robotic egbe na-ehicha ụlọ ọrụ Onye nrụpụta na onye na-ebubata |Yunhua
1. Oge nhicha dị mkpirikpi, arụmọrụ kwụsiri ike
2. Na-akpaghị aka zuru ezu usoro nhicha na-enweghị ọrụ aka
3. Gbochie ezigbo nsogbu kpatara mmetọ na ịgbado ọkụ
Ọrụ 1:Ịcha waya
Ọrụ 2:Nhicha ọkụ
Ọrụ 3:Fesa mmanụ
Ebe a na-ehicha ọkụ ọkụ
2. Na-akpaghị aka zuru ezu usoro nhicha na-enweghị akwụkwọ ntuziaka
3. Gbochie ezigbo nsogbu kpatara mmetọ naịgbado ọkụ
Emebere ebe a na-ehicha ihe na-akpaghị aka maka egbe ịgbado ọkụ nke robot na egbe ịgbado ọkụ na-akpaghị aka nke nwere sistemu ịgbado ọkụ na-akpaghị aka.Arụ ọrụ nke akụrụngwa na-achịkwa robot, na akụrụngwa ga-enye akara nzaghachi kwekọrọ na robot.
Ụlọ ọrụ nhicha na-eji reamer rotation wepụ ịgbado ọkụ slag na adịghị ọcha si ịgbado ọkụ isi ọkụ na ịgbado ọkụ nozzle.The ihicha ọdụ na-onwem na a zuru ezu mmanụ injection Ọdịdị, na ịgbado ọkụ Torch isi nwere ike ịgba mgbochi splash mmiri mmiri mgbe ẹkụre nhicha, otú ahụ. dị ka ibelata ihe gbasara nke puru omume nke re-adhesion nke ịgbado ọkụ slag.It na-onwem na akpaka waya ọnwụ ngwaọrụ, nke eletriki trilled site robot njikwa ma ọ bụ mechanically triggered site na ịgbado ọkụ ọkụ.
Ikuku nkụ na-enweghị mmanụ
Ọnụ ego nke ikuku achọrọ
10 lita kwa nkeji
4-5 Nke abụọ
Ikike mgbochi ịgbasa
Ọnụ ego injection mgbochi splash
Enwere ike idozi
1. Nhazi nke nhicha na mmanụ mmanụ n'otu ọnọdụ nke usoro ịkpụ nke Torch ihicha, robot na-achọ naanị otu mgbaàmà iji mechaa nhicha na ntinye mmanụ.
2. Ụlọ ọrụ nhicha ahụ chọrọ naanị 6-7 sekọnd iji mechaa usoro nhicha ahụ dum, ma e jiri ya tụnyere ngwaahịa ndị ọzọ yiri ya na 12 sekọnd, nke na-echekwa oge nhicha nke robot ma na-eme ka arụ ọrụ nke robot dịkwuo mma.
3. The ojiji nke multifunctional reamer, ihicha ọkụ nwere ike ịbụ na mgbọrọgwụ nke conductive ọnụ oche ihicha mmetụta nke ọma.
4. A na-echekwa ihe ndị bụ isi nke usoro ịcha waya nke Torch dị ọcha site na akwa mkpuchi dị elu, nke na-enweghị mmetụta na-egbuke egbuke na ájá.
5. Ụdị ngwaọrụ injection mmanụ ọhụrụ dị na ebe a na-ehicha ọkụ ọkụ na-achịkwa robot site na valvụ solenoid.
6. The mma na a pụrụ ịdabere na atomizing mgbochi splash gị n'ụlọnga nwere ike iru mgbọrọgwụ nke ịgbado ọkụ isi nke ọma.N'otu oge ahụ, ọnụ ụlọ ịgba mmanụ mechiri emechi na-ebelata nsogbu mmetọ ikuku mmanụ ma e jiri ya tụnyere ihe ochie.
7. A na-ejikwa valvụ solenoid na-eme ka ihe na-egbutu waya na-achịkwa, na ịcha waya na-eme ka ọ dịkwuo mma. Jide n'aka na eriri ịkpụ na-adaba n'ime igbe nchịkọta ma e jiri ya tụnyere ngwaahịa ika ndị ọzọ, nhazi eletrik dị nnọọ mfe, a na-etinye ihe niile na-achịkwa n'enweghị nsogbu. na ikpe, na e nwere nnọọ ole na ole ekpughere pipeline
Ajụjụ. Enwere ike iji ebe a na-asachapụ nozzle maka robot niile?
A. Ee, enwere ike iji ya maka ụdị robot niile, dị ka Kuka, Yaskawa, Fanuc, Abb, wdg.
Q. Gịnị banyere voltaji nke ịgbado ọkụ egbe ihicha ọdụ?
Ajụjụ. Enwere ike ịnye ihe nhicha egbe maka robọt ịgbado ọkụ kwa ọnwa?
A. 100 ~ 150 nkeji kwa ọnwa
Q. A na-eji ọdụ dị ọcha ọwa maka ịkpụ waya?
A. Ee, ọ bụ otu n'ime ọrụ ahụ.enwere ike iji ya maka ịkpụ waya, ịgba mmanụ na nhicha ọkụ.
Ajụjụ. enwere akụkụ ọ bụla enwere ike iji maka ebe a na-ehicha egbe egbe
A. mgbochi mkpasa mmanụ, waya cutter na ream.
Nke gara aga: Nkọwa dị elu China isii axis 6kg TIG Robotic Welding Mini Robot Arm 6 Axis Automatic Machine Industrial Robot Arm na akwụkwọ ikike ọnwa 24 CE
Osote: Ọnụ kacha mma na China 20kg Multifunction isii Spindle Mechanical Arm Welding Robot
egbe Cleaner maka ịgbado ọkụ robot
Ebe na-asachapụ nozzle
ebe a na-ehicha ihe ịgbado ọkụ
ụlọ ọrụ mmepụta ihe dị ala ọnụ ahịa China Monthly Deals Hazie...
Ọnụahịa kacha mma na China 20kg Multifunction Six Spin ...
Nkọwa dị elu China isii Axis 6kg TIG Robotic ...
1430mm ogwe aka ogologo njikwa robot maka loading ihe ...